Mann Lauds wuxuu ku tuujiyaa kamaradda iPhone X natiijooyin aan caadi ahayn | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | | dhowr
IPhone X waa ciyaar fiican meelo badan laakiin gaar ahaan sawir qaadista. Tikniyoolajiyadda cusub ee ay Apple ku hirgelisay qalabkan cusub ayaa ka dhigtay malaayiin qof waxaa ku mashquulsan sawirrada iPhone X. Qalabka cusub ee 12 megapixel wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay si dhakhso leh ugu soo qabtaan xaaladaha aadka u adag marka loo eego iPhone-yada kale.
Sawir qaadaha Mahadsanid Mann waxay go'aansatay inay tijaabiso kamaradda qalabka si buuxda oo waxay heshay sawirro aad u qurux badan. Waxa uu ku qiimeeyay sida ugu fiican muraayadaha telephoto cusub taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku dhaweyso sawiradaada adigoon u hureynin tayadooda. Boodka ka dib waxaan kuu daynaynaa sawiro dheeri ah iyo fikirka Mann Lauds.
Muraayadda telephoto iyo dareeraha cusub ee iPhone X, furayaasha kamaraddeeda
Noocyada muraayadaha indhaha ee iPhone X waa 28mm @ f / 1,8 iyo 52mm @ f / 2.4 (hore, hogaamintu waxay ahayd 56mm f / 2,8.) Qalabkan yar ee la hagaajiyay micnaheedu waa muraayada ayaa dhaqso badan. - iftiimiya xaaladaha, yareynta qulqulatada dhaqdhaqaaqa iyo yaraynta buuqa.
Mann Lauds ayaa cadeeyay Bilowgii Waxay adeegsaneysay noocyada loo yaqaan 'Plus' tan iyo markii lagu soo saaray iPhone 6. Xaaladda iPhone X, waxay ku xusuusinaysaa asalka iPhone-ka inkasta oo shaashadda ay aad u ballaaran tahay (5,8 inji) Waxyaabaha cusub ee ku saabsan kamaradda qalabka cusub ayaa lagu ammaanay xirfadlayaal waaweyn sida Lauds oo hubiya taas iPhone X wuxuu ku fiicnaadaa iftiinka hoose marka loo eego kuwii ka horreeyay.
Dhanka kale, muraayadaha telephoto ee qalabka waxaa lagu qalabeeyaa xasiliyaha muuqaalka muuqaalka. Dhinaca kale, iPhone 8 waxaa kaliya lagu xasiliyey xagalka ballaaran, ma ahan muraayadaha telephoto, taas oo u oggolaaneysa kamaradda iPhone X inay aad u yaraato oo ay hesho natiijooyin wanaagsan.
Waxay sidoo kale tijaabisaa qaabka sawirka labadaba kamaradaha hore iyo kuwa dambe. Sharax in kamaradda dambe ay leedahay laba muraayadaha indhaha si loo abuuro khariidad qoto dheer taas oo u baahan iftiin badan waxayna isticmaashaa lens-ka telephoto. Taabadalkeed, kamaradda hore malahan muraayadahaan, laakiin waxay adeegsataa kamaradda TrueDepth (si loo abuuro qoto dheer qariidada, sida ay ku sameyso Face ID), tani waxay looma baahna iftiin badan (ama waxba) si loo abuuro khariidad qoto dheer. Natiijooyinka waxaa lagu arki karaa sawirka aad ka koreyso xariiqyadan.
Sawirro - Web waxaa qoray Mann Lauds
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Sawir qaade Mann Lauds wuxuu tijaabiyaa kamaradda iPhone X natiijooyinkuna waa kuwo cajiib ah
HomePod waa la daahi doonaa illaa horaanta sanadka soo socda